कसरी दिइन्छ अपराधीलाई फाँसी ?
नयाँ दिल्ली– निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्यामा संलग्न चार दोषीलाई शुक्रबार फाँसी दिइएको छ।
समाचार एजेन्सीका अनुसार बलात्कारमा दोषी ठहर गरिएका मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षयकुमार सिंह र पवन गुप्तालाई दिल्लीको तिहाड जेलमा बिहान साढे ५ बजे फाँसी दिइएको हो।
फाँसीपछि जेलका निर्देशक सन्दीप गोयलले चार जनालाई मृत घोषित गरे। गोयलका अनुसार चारै जनालाई एकैसाथ फाँसी दिइएको थियो।
सन् २०१२ डिसेम्बर १६ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा सवार २३ वर्षीया निर्भयामाथि ६ जनाले सामूहिक बलात्कार गरी सडकमा फालेका थिए। त्यसपछि अस्पताल भर्ना भएकी निर्भयाको डिसेम्बर २९ मा मृत्यु भएको थियो।
कसरी दिइन्छ फाँसी ?
फाँसी दिने बेलामा केही नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम पालन नगरी कसैलाई पनि फाँसी दिन पाइँदैन।
डेथ वारेन्ट जारी भएपछि कैदीलाई यसबारे जानकारी दिइन्छ। जेल प्रशासनलाई पनि डेथ वारेन्टको जानकारी दिइन्छ। कैदी बसेको जेलमा फाँसीको व्यवस्था छैन भने उसलाई डेथ वारेन्ट आएपछि नयाँ जेलमा सारिन्छ।
सामान्यतयाः फाँसी बिहानको समयमा दिइन्छ। बिहान अन्य कैदी सुतेका हुने र कैदीले मृत्युदण्डका लागि दिनभर प्रतीक्षा पनि गर्न नपर्ने भएकोले बिहानको समय राखिएको बताइन्छ। यसका साथै परिवारका सदस्यलाई त्यही दिन अन्तिम संस्कार गर्न समय होस् भनेर पनि बिहानै फाँसी दिने गरिएको हो।
कैदीको परिवारलाई फाँसी दिनुभन्दा १०–१५ दिन अघि नै यसबारे सूचना दिइन्छ। जेलमा कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छर अरु कैदीभन्दा भिन्न सेलमा राखिन्छ। फाँसी हुनु केही दिनअघि परिवारका सदस्यलाई भेट्न दिइन्छ र कैदीले जेलमा काम गरेर पैसा कमाएको छ भने त्यो पैसा परिवारका सदस्यलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।
फाँसी दिइने दिन बिहानै जेलरको निगरानीमा सुरक्षाकर्मीले कैदीलाई फाँसी कक्षमा लैजान्छन् । फाँसी दिने बेला जल्लादबाहेक अन्य तीन अधिकारी उपस्थित हुन्छन्– जेलर, मेडिकल अफिसर र मजिस्ट्रेट।
फाँसी दिनुअघि जेलरले मजिस्ट्रेटलाई आफूले कैदीको पहिचान गरिसकेको र उनलाई डेथ वारेन्ट पढेर सुनाइसकेको भनेर जानकारी दिन्छन्। डेथ वारेन्टमा कैदीको हस्ताक्षर पनि हुन्छ।
फाँसी दिनुअघि कैदीलाई नुहाइन्छ र नयाँ कपडा लगाउन लगाइन्छ। त्यसपछि फाँसी दिने ठाउँसम्म ल्याइन्छ। फाँसी दिनुअघि व्यक्तिको अन्तिम इच्छा सोधिन्छ। त्यसमा उसले ‘मलाई फाँसी नदिइयोस्’ भन्न पाउँदैन।
जुन अपराधीलाई फाँसी दिइन्छ, उसँग अन्तिम समयमा जल्लाद अर्थात् फाँसी दिने व्यक्तिमात्रै हुन्छन् । फाँसी दिनुअघि जल्लादले अपराधीको कानमा केही बोल्छन्। अन्तिम समयमा जल्लादले अपराधीको कानमा उसको धर्मअनुसार राम राम, सलाम वा यस्तै केही भनेर ‘म आफ्नो कर्तव्यको अगाडि बाध्य छु’ भन्छन् र फाँसी दिन्छन्।